Baadhitaan ayaa la furay kadib dhimashadii tacliintii reer Guinea ee lagu weeraray agagaarka Rouen - JeuneAfrique.com -
ACCUEIL » COMPANY Baadhitaan ayaa la furay ka dib dhimashadii tacliinta Guinean ee lagu weeraray meel u dhaw Rouen - JeuneAfrique.com
Baaritaan ayaa la furay ka dib dhimashadii tacliinta Guinean ee weerarka ku dhow Rouen - JeuneAfrique.com
Akademiyada Guinean Mamoudou Barry, ayaa weerartay Jimcaha 19 Luulyo agagaarka Rouen. ©
Baadhitaan ayaa la furay ka dib dhimashadii aqoonyahankii da'da yar ee reer Guinea, Mamoudou Barry, oo si xun loo weeraray Jimcihii 19 July oo u dhaw Rouen, ayaa laga bartay Axadda laga soo bilaabo ilaha isku xirka.
Wax walba waxaa loo sameeyaa in lagu aqoonsado laguna loolan galo qoraaga weerarka ku kiciyay nolosha # MamadouBarry. Waxay noqon doontaa cadaaladda in la iftiimiyo ficilkan foosha xun, ”Wasiirka Arimaha Gudaha Christophe Castaner ayaa ku qoray Twitter. "Fikradihi ugu horeeyey waxay la xiriiraan kuwa uu jecel yahay oo aan la wadaago shucuurtooda iyo xanaaq."
Ilaha booliska, Mamoudou Barry waxaa lagu weerarey Canteleu, agagaarka Rouen. Waxaa badbaadiyay badbaadada, cusbitaal ku yaal Rouen, halkaas oo uu ku dhintay Sabtidii. Baadhitaannada ayaa socda. Dhageysiga iyo caddeynta waa in ay suuragal ka dhigtaa in la caddeeyo habka ay wax u socdaan, "ayuu yiri xeer ilaaliyaha Rouen Pascal Prache farriin uu siiyay AFP.
Mamoudou Barry wuxuu cilmi-baare ka ahaa Jaamacadda Rouen Normandy, waxaan ka baranay dugsiga. Sida ku xusan goobta Fikirka ah ee Afrika, wuxuu difaacay qaanuunkiisa 27 bishii Juun ee la soo dhaafay ee Rouen. Wuxuu guursaday aabihiisna gabar, wuxuu ahaa "dhibane aflagaado afka ah iyo jir ahaaneed ee rabshadaha ba'an ee sababay dhaawaca maskaxda wuxuuna galiyay coma qoto dheer sida aroortii hore ee bisha Luulyo 19", waa ayuu yiri isla goobtan.
Liesse iyo geesinimada Waqooyiga, rabshadaha Koonfurta: sida Moroccans ay ugu nooleyd guushii Algeria ee ay la galeen CAN 2019 - JeuneAfrique.com
Qeybta hoose ee Mayo-Mokosta oo ku taala dhinaca hore ee Boko Haram
Disable ogeysiisyada dhawaaqa ee Windows 10
Messi ayaa hadiyad u diraya dhalashadii 15aad ee Moukoko, oo ah kubad sameeyaha kooxda Dortmund
Waxaad halis ugu jirtaa ciqaabta dilka: Sababtoo ah waxay rabtay inay u ekaato Angelina Jolie! - VIDEO
DRC: ADFs waxay adkeyn doonaan qabashada Beni, inka badan lixdan qofna waa ay dhinteen saddex usbuuc gudahood - JeuneAfrique.com
Gabon: Ike Ngouoni Aila Oyouomi, af hayeenka madaxtooyada, ayaa lagu xidhay Libreville - JeuneAfrique.com
DADKA & LIFESTYLE7,799
Video dheeraad ah3,601